Sebenzisa i-WhatsApp nge-API > UVielhuber David
Ngaphandle kwakho konke ukukhathazeka kokuvikelwa kwedatha, i- WhatsApp kuseseyi-app eyintandokazi yezithunywa zaseJalimane. Ngaphezu kohlelo lokusebenza olukhethekile lwe- WhatsApp Business , i-Facebook iphinde yakha i-interface esemthethweni, i-WhatsApp Business API, ukuyenza ibe mnandi kakhulu ezinkampanini. Uma ufuna ukuthumela imiyalezo ye-WhatsApp ngokuhlelekile kusuka kuhlelo lwakho lokusebenza lwewebhu, kunezinye izindlela futhi.
Umzila osemthethweni udlula nge-WhatsApp Business API: Uma ufuna ukusebenzisa lokhu ngqo, kufanele ubhalise nomunye wabahlinzeki abasemthethweni kwinethiwekhi yozakwethu . IMessageBird , ngokwesibonelo, izibonakalisile lapha. Ngaphandle kokungena emininingwaneni eqondile, ngizokukhombisa izindlela ezibaluleke kakhulu lapha:
Njengemfuneko, udinga inombolo yocingo evumelekile yaseJalimane exhunywe okungenani kuhlelo lwedatha ye-WhatsApp.
Ukuthumela imiyalezo kuncike emikhawulweni eqinile: Ukuthumela koxhumana nabo bangaphandle kungenzeka kuphela kusetshenziswa okubizwa ngama-templates emiyalezo , okumele athunyelwe futhi avunyelwe ngesandla. Uma oxhumana naye ephendula, ungathumela noma imiphi imilayezo yombhalo kulo oxhumana naye nge-API kungakapheli iwindi lesikhathi lamahora angama-24.
Udinga ukungena ngokusobala kubo bonke oxhumana nabo, okufanele uzisebenzise.
Izimali ezivela kumhlinzeki ovela eceleni zisebenza ngomyalezo ngamunye othunyelwe.
Ikholi yangempela ye-API kusibonelo se-MessageBird (ngosizo lwe-_curl kusuka ku- stringhelper ) ibonakala ilula kakhulu:
Uma une-server yakho nefoni ephathekayo (engasetshenziswanga), kunenye futhi indlela yokufeza okufunayo nokugwema imikhawulo engenhla. Lapha usebenzisa ukusebenza kweWhatsApp Web . Le mitapo yolwazi emibili elandelayo ilungele le njongo.
I-WebWhatsapp wrapper ibikade ikhona isikhathi eside futhi ibuye isuselwe kuPython naseSelenium . Ukuthumela imilayezo kusebenza ngokulandelayo, isibonelo:
Ama- Baileys amancane kakhulu, ngakolunye uhlangothi, asuselwa kuTypeScript nakuWebSocket. Imilayezo ithunyelwa kusetshenziswa ikhodi elandelayo njengesibonelo:
Yomibili imitapo yolwazi isebenza kumgomo ofanayo: uhlelo lokusebenza lwewebhu lulawulwa kude, ukufakazelwa ubuqiniso kudingeka kanye kuphela (iseshini ibuyiselwa ngesikhathi esizayo lapho ibizwa khona). Ayikho imikhawulo (ngokuqhathaniswa nokuthunyelwa kwemilayezo evamile).